काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुकमा दण्डहीनताले सीमा नाघेको टिप्पणी गरेका छन्। पर्साका नेकपा नेता मुकुश चौरसियाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले लिन नमानेको प्रशंगमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
समाजिक सञ्जालमा नेता कोइरालाले जनताले न्याय माग्न कहाँ जाने ? भन्दै सरकारसँग प्रश्न पनि गरेका छन्। गत बिहीबार नेकपाको बिन्दावासिनी गाउँपालिका अध्यक्षको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा असन्तुष्ट पक्षले विथोल्न खोज्दा भएको झडपमा परी गम्भीर घाइते भएका चौरसियाको शुक्रबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएका थियो।
आक्रमण गर्नेहरुमाथि प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता मानेको छैन्। सोही सन्दर्भमा कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘दण्डहीनताले सीमा नाघिसक्यो। व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा प्रहरी मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन। तै पनि हामी कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं। तर कहाँ छ कानुनी राज्य ? जनता न्याय माग्न कहाँ जाने ?’